DISCLAIMER: "नेपाली हेल्थ मीडिया डट कम" को अनलाईन वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको आर्टिकलहरु केवल सूचना र सामान्य जानकारीको उद्देश्यको लागि मात्र हो. यो कसैको व्यक्तिगत परिस्थिति, पेशेवर चिकित्सा, निदान वा उपचारको विकल्पको लागि होइन र भर पर्नु हुँदैन.
"नेपाली हेल्थ मीडिया" वेबसाइट, स्वास्थ्य सम्बन्धि विभिन्न किताव, आयुर्वेद, अनलाईन रिसर्च, विज्ञहरुको भनाई र अन्य विविध अनौपचारिक स्रोतहरुमा आधारित छ. नेपाली हेल्थ मीडियाको यस अनलाईन वेबसाइटमा प्रकाशित हरेक जानकारीहरुको उपयोग गर्नु अघि सम्बन्धित चिकित्सक संग परामर्श गरी सत्यता भए-नभएको प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ. "नेपाली हेल्थ मिडिया" मा प्रकाशित सामाग्रीहरु बिना ग्यारेन्टी वा बिना वारेन्टी प्रदान गरिएको छ. यस वेबसाइटमा रहेको अनुवादको सामग्रीको सत्यताको लागि "नेपाली हेल्थ मीडिया" जिम्मेवार छैन ।
"नेपाली हेल्थ मीडिया" को यस अनलाईन वेबसाइटमा प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि जानकारी डाक्टर संग परामर्श नगरी उपयोग गरेमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ. यहाँ प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि अनलाईन सामग्री वा जानकारीको उपयोग गर्नु भयो भने तपाइँले आफ्नै जोखिममा यसो गर्दै हुनुन्छ. यसमा "नेपाली हेल्थ मीडिया" जिम्मेवार हुने छैन.
"नेपाली हेल्थ मीडिया" को जानकारीलाई व्यक्तिगत सल्लाहको रुपमा भर पर्नु हुँदैन. "नेपाली हेल्थ मीडिया" ले मेडिकल सल्लाह प्रदान गर्दैन. "नेपाली हेल्थ मीडिया" कुनै पनि पेशेवर चिकित्साको सल्लाहलाई हृदयबाटै सम्मान गर्दछ.
"नेपाली हेल्थ मीडिया" को अनलाईन वेबसाइटमा रहेका सबै सामग्री र जानकारी सूचनाको उद्देश्यका लागि मात्र अनलाईनमा प्रकाशित गरिएको छ।
तपाइँको स्वास्थ्य वा मेडिकल सर्तको सवालमा तपाइँको डाक्टर वा अन्य दक्ष पेशेवर चिकित्साको सल्लाह लिनुहोस. तपाइँले पेशेवर चिकित्सको सल्लाहलाई कहिले पनि वेवास्ता नगर्नुहोस.
यदि तपाइँलाई चिकित्सा आपतकालीन आए जस्तो लाग्छ भने डाक्टरलाइ बोलाउनुहोस, नजिकैको अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा जानुहोस वा आपतकालीन सेवाहरुमा फोन गर्नुहोस होस्. यदि तपाइँ "नेपाली हेल्थ मीडिया" वेबसाइटमा प्रदान गरिएको कुनै पनि जानकारीमा भरोसा गर्ने छनौटमा हुनुहुन्छ भने तपाइँ केवल तपाइँको आफ्नै जोखिममा त्यसो गर्दै हुनुन्छ. यसमा "नेपाली हेल्थ मीडिया" जिम्मेवार हुँदैन.
"नेपाली हेल्थ मीडिया" मा लिंक गरिएको कुनै पनि जानकारीहरु, PDF Files, Books, वा अन्य कुनै पनि अन्य वेबसाईटहरुको जानकारी तपाइँको स्वस्थ्य स्थिति अनुसार सिर्जना गरिएका वा लेखिएका होइनन. त्यसैले अनलाईनमा पाइएको कुनै पनि जानकारीले तपाइँमा जोखिम ल्याउन सक्छ. "नेपाली हेल्थ मीडिया" मा भएका कुनै पनि जानकारी वा कुनै पनि शैक्षिक प्रदायकहरुको दावीको लागि "नेपाली हेल्थ मीडिया" जिम्मेवार हुँदैन.